Autoupdates tsy mahomby amin'ny WordPress? FTP tsy mahomby? | Martech Zone
Autoupdates tsy mahomby amin'ny WordPress? FTP tsy mahomby?
Zoma, Desambra 31, 2010 Alahady Oktobra 30, 2011 Douglas Karr
Vao tsy ela akory izay, nanana mpanjifa nametraka ny mpizara azy manokana hampiasana amin'ny WordPress. Rehefa ny vao haingana Fiarovana 3.04 Tonga amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny vaovao farany, nisy ny fahatsapana fa maika ny hametrahana ity kinova ity amin'ny mpanjifanay rehetra. Na izany aza, ity mpanjifa manokana ity dia mitaky hatrany ny fanavaozantsika ny tanana amin'ny tanana WordPress… dingana iray fa tsy ho an'ny olona torana!
Tsy hahazo ilay mahazatra “tsy mahay manoratra rakitra”Lesoka amin'ity bilaogy ity. Nomena efijery fidirana FTP kosa izahay. Ny olana dia ny hamenoantsika ny taratasim-bola FTP ary hanao izany mbola tsy mahomby… Mifototra amin'ny mari-pahaizana tsara!
Nifandray tamin'ny namantsika tao amin'ny Lifeline Data Center, Indiana aho ivon-toerana lehibe indrindra, satria manana Geeks Apache vitsivitsy izy ireo ary nanamboatra ny mpizara azy manokana. Nanome vahaolana tsotra ahy izy ireo - nanampy ny mari-pahaizana FTP mivantana tao anatin'ny wp-config.php apetraho amin'ny kaody hardcode ny mari-pahaizana FTP:
farito ('FTP_HOST', 'localhost'); farito ('FTP_USER', 'solonanarana'); farito ('FTP_PASS', 'teny miafina');
Noho ny antony sasany, ireo mari-pahaizana mitovy tsy niasa tamin'ny endriny, dia niasa tanteraka rehefa napetraka tao anaty fisie fikirakirana! Ary koa, mahatonga ny WordPress hihetsika tahaka ny tsy ilana FTP…. tsindrio fotsiny ny vaovao farany dia mandehana!
Fomba 5 hamonoana ny fifaninanana misy anao amin'ny atiny
Google sy AMEX mamokatra horonantsary maimaim-poana ho an'ny orinasa madinidinika
Dec 31, 2010 ao amin'ny 3: PM PM
Niaina ny lesoka nohavaozina ho azy avy hatrany aho taorian'ny nanarenako ny lozisialy ary namboariko ny fametrahana WordPress vaovao. Ny olana dia nipoitra avy amin'ny Firefox, fa tsy WordPress - ny hafa mety hiaina olana mitovy amin'izany raha mitovy ny ahy ny anaran'ny mpampiasa FTP sy ny solonanarana WordPress (na dia samy manana ny kapitaliny sy ny teny miafina) aza.
Ny olana dia ny Firefox, raha manana "mahatadidy tenimiafina" ianao, dia hanitsy avy hatrany ny mpampiasa / mandalo amin'ny endrika izay heveriny fa tokony hiorina amin'izay voatahiry ao amin'ny fitantanana tenimiafinao. Raha ny amiko dia voatahiry ireo mari-pahaizana momba ny WordPress, fa ny taratasiko FTP kosa dia tsy, satria afaka ampiasaina amin'ny SSH ao amin'ilay tranokala izy ireo. Ny olona amin'ity toe-javatra ity dia mety hanafoana vetivety ny "tadidio ny tenimiafiko" ao amin'ny Preferences / Safidiny rehefa manandrana mampiasa ny fanavaozana auto-automotra WordPress na mampiditra kaody kaody amin'ny WordPress hanitsiana an'io fihetsika io.
Jan 1, 2011 ao amin'ny 4: 23 AM
Izaho dia nanana olana mitovy amin'ny fananganana trano any Apache. Nivadika izany dia vokatry ny fahazoan-dàlana diso sy fananana amin'ireo rakitra sy lahatahiry sasany.
Ny rohy etsy ambony dia nanome fomba fiasa momba ny fanitsiana ny olana nefa tsy mampiasa mari-pahaizana ftp. Mazava ho azy fa tsy mamporisika anao hitady ny lahatahiry mpampiasa anao hatramin'ny 775 (ary tsy nanao izany aho) fa mitarika ahy amin'ny làlana tsara izany.
Jan 3, 2011 ao amin'ny 7: 21 AM
Ho an'ny hafa mitady vahaolana mety: namaha ny olan'ny fanavaozana ny blaogera iray hafa tamin'ny alàlan'ny fanerena ny mpampiantrano azy hampiasa php5 tamin'ny fampidirana ireto manaraka ireto amin'ny rakitra .httaccess:
5 Jan 2011 amin'ny 12:19 PM
Misaotra anao nizara ny fahalalana, niaina olana tamin'ny autoupdates aho fa ny hany vahaolana hitako dia ny fampiatoana ireo plugins avy eo hamoahana ny WordPress ary hampihetsika ny plugins rehetra.
Ity toro-hevitra ity dia ho an'ny olana tsy mitovy aminy saingy tsara ny mahafantatra ny fomba famahana azy.
Fiarahabana avy any Mexico!